Awudingi Isiqu Sebhizinisi Ukuqonda Lokhu | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 23, 2013 NgoLwesithathu, Okthoba 23, 2013 Douglas Karr
Kulungile, sekuyisikhathi sokuganga. Kuleli sonto ngishayiwe amahlandla ambalwa futhi ngilahlekelwe ngempela ukuthi abanye balaba bantu bakwenzile inqobo nje uma benamabhizinisi. Ngifuna ukulungisa izinto ezimbalwa lapho uzoxoxisana futhi uthenge izinsizakalo kwi-Agency yakho elandelayo.
Inani yilokho Okukhokhayo, Hhayi Lokho Okutholayo
Lezi izindleko zomkhiqizo noma insiza ofuna ukuyithenga. Ngenkathi izindleko zemikhiqizo emibili noma izinsizakalo ezimbili zingafana ncamashi, umkhiqizo uqobo noma insizakalo oyitholayo ngeke ifane. Ngenxa yalokhu, ngicela ungaceli uhlu lwezinto zokuthenga izinto ezingekho emthethweni bese ucela izingcaphuno ezilinganiselwe… siyazi ukuthi wenzani. Uzothatha uhlu lwezitolo futhi ucele izingcaphuno eziphelile bese uzithenga kubo bonke abanye abantu. Asibona bonke abanye abantu. Kungakhathalekile ukuthi uhlu lokuthenga lunemininingwane engakanani, ngiyaphinda ngithi, akubona bonke abanye abantu. Esikunikeza kona kuzohluka. Izici ezahlukahlukene, izinsizakalo ezahlukahlukene, izikhathi ezihlukile, izimo zengqondo ezihlukile nemiphumela yebhizinisi ehlukile ekugcineni.
Uma uthenga i-ejensi ngokuya ngentengo, uyisehluleki esingaqondi ibhizinisi. Lapho, ngakusho. Ukumaketha okuku-inthanethi akuyona iWal-mart. Iyeke.
Ukukhokha kancane akusho ukuthi ulondoloze imali
Okunqume futhi wavumelana ngakho ukukhokha, ngethemba, kuboshelwe kunani obikezela ukuthi uzolithola nomkhiqizo noma insizakalo. Uma uthola ilayisense yesoftware yonyaka futhi isoftware ikusizile ukwenza izinto kahle (aka: Return on Investment), ikusizile ukugcina ibhizinisi eliningi (aka: Return on Investment), ikusizile ekutholeni ibhizinisi eliningi (aka: Return on Investment) noma kukusizile ukukhulisa inzuzo (aka: Return on Investment) bese i- inani lalokho okutholile lidlule inani olikhokhile. Lokhu kuyinto enhle. Yilokhu ofuna ukukwenza.
Ngakolunye uhlangothi, ukukhokha Ngaphansi imali nokungatholi imbuyiselo ekutshalweni kwemali kubi. Lokhu kusho ukuthi ulahlekelwe yimali… hhayi igcinwe imali. Ngakho-ke… hamba uyothenga ilogo kusayithi le-crowdource esikhundleni sokuqasha inkampani yokubeka uphawu futhi usebenzise amadijithi ayisithupha ukubukeka njengenhlangano eyizigidigidi zamadola esikhundleni sesitolo sotshwala esisedolobheni. Kufanele ulindele imiphumela ehlukile nenani elihlukile lemali oyitshalile.
Ukukhokha okuningi akusho ukuthi uklebhuliwe
Ithelevishini kamama wami isanda kuqhekeka kuleli sonto. Wabheka emuva futhi yayineminyaka engu-7 ubudala futhi yabiza u- $ 2,200 wakhe emuva lapho eyithenga. Namuhla, umama wami u-ode ithelevishini engcono kakhulu enesikrini esibanzi $ 500. Wayemangazwe ukuthi ubuchwepheshe buvele kanjani ngokushesha okukhulu nokuthi angabiza kanjani ukuthenga ithelevishini entsha, engcono. Wayengathukutheli ukuthi waklebhulwa eminyakeni engu-7 edlule. Wayejabule ngokuthi uthole okuthile okumnandi manje. Lokhu kuyinto enhle.
Sisanda ukubika kokuhlaziywa kwesayithi okuzenzakalelayo obejwayele ukuthatha isonto ukuthi abantu ababili baqedele ngokwenza. Okusithathe cishe amahora angama-60 womuntu ngochungechunge lwezinhlelo zokusebenza zesoftware esizinikezile manje kusithatha ngaphansi kwehora. Ngazisa amanye amaklayenti ethu ayejabule ngokubika kwethu kwangaphambilini ukuthi azi yini ukuthi kuzanywa kanjani okusha futhi ngibazise lokho - kusukela izindleko zethu manje sekuyingxenyana yalokho abebeyikho, besidlulisa lokho kulondolozwa kumakhasimende ethu. Kubalulekile - abakukhokhele isikhathi esingu-1 manje sebengathola unyaka wonke wemibiko evela kithi.
Abaningi babhalisile, kepha omunye wangibhalela futhi wathi babedinwe ukuthi babenjalo kuqhume ukuthi bakhokhe imali engaka ngombiko owedlule. Vele, ngenkathi siletha umbiko, babejabule… bengathukuthele. Basebenzise lo mbiko njengepulani yokwakha isu labo lokumaketha online ngonyaka olandelayo. Ukutshalwa kwezimali eziyizinkulungwane ezimbalwa kulo mbiko kungaholela ekubuyiselweni kwamakhulu ezinkulungwane zamaRandi. Yilokho kanye abakucabangayo, kuze kube yilapho sehlisa intengo yethu. Lapho sehlisa intengo ngandlela thile sisuke enanini elikhulu laya ku-ripoff.
Manje njengoba i-rant isiphelile, ngizokusho lokhu. Sizosebenza kahle ngangokunokwenzeka ukuqinisekisa ukuthi inani lomsebenzi esiwenzayo lidlula inani olikhokhayo. Lapho senza lokho, uzothola imiphumela ephezulu yebhizinisi. Lapho uthola imiphumela yebhizinisi ephezulu, uzowuthokozela umsebenzi esikwenzela wona. Uma singayifinyeleli leyo miphumela, lapho-ke nathi singaxoxa ngalokho.
Tags: agencybuyizindlekoUkuphumelelaukukhungathekathola okukhokhelayointengoizingcaphunouhlu lwezitoloInani
Yenza Amanani Wentengo Nokuqhathanisa Njenge-Ninja
I-Oct 29, i-2013 ku-1: i-54 PM
I-Oct 29, i-2013 ku-2: i-03 PM
Dec 13, 2013 ku-8: 28 AM